Ghostwriter Chemistry I Waxaan qormooyinkaaga kuugu qori doonnaa waraaqo-xaashiyaal
Qorayaashayagu waxay ku takhasuseen cilmiga kimistariga
Ka arday ahaan barnaamijka shahaadada kimistariga, waad la macaamili doontaa, iyadoo kuxiran xulashada takhasuskaaga maadooyin kala duwan oo cilmiga kiimikada ah iyo kiimikada guud, kiimikada dabiiciga ah iyo kiimikada jirka iyo sidoo kale aagagga kiimikada afka iyo kiimikada xisaabinta. Sayniska kimistarigu wuxuu aad ugu dhow yahay cilmiga fiisigiska. Inta lagu gudajiro daraasadaada kimistariga, waxaad baran doontaa halabuurka walxaha kiimikada ee kaladuwan sidoo kale waxaad baari doontaa geedi socodka falcelinta kiimikada kala duwan adoo adeegsanaya tusaalooyin wax ku ool ah shaybaarada. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno adiga shaqada!
Isdhexgalka sayniska dabiiciga ee kaladuwan wuxuu ku darayaa kakanaanta barashada kiimikada. Fahamka bayoolajiga ayaa looga baahan yahay kiimikada dabiiciga ah. Kiimikada jireed, fiisigiska ayaa dib u dhigaya, laakiin xisaabta markay soo baxdo waa inaan la dhayalsan. Waxa ka dambeeya xisaabinta qeyb ahaan loo soo gaabiyay waxaa la soo saari karaa oo keliya marka mabaadii'da kiimikada, jirka iyo xisaabta ee ka dambeysa la jabiyo.
Kiimikada aragtida ahi waxay sii socotaa tallaabo dheeraad ah. Wax badan ayaa la fahmi karaa iyada oo aan la fahmin hababka fiisigiska tirakoobka. Si aan kaliya loogu isticmaalin jilitaanka kumbuyuutarka aaggan, laakiin si loo sii horumariyo, loo hagaajiyo loona isticmaalo xirfad ahaan, tani waa lagama maarmaan.
Caawimaaddeenu waxay noqon kartaa tallaabo wanaagsan oo loo qaado ka shaqeynta habkaaga maadadan murugsan.
Koorsada kiimikada waxay u baahan tahay waqti badan, taas oo inta badan ay ugu wacan tahay laylisyada sheybaarka kala duwan. Maalmaha shaqadu badanaa waxay kujiraan waqtiga laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 18 galabnimo ama, iyadoo kuxiran xaalada imtixaanka, inta badanna ka dheer. Badanaa tan waxaa ku xiga abuuritaanka borotokoollo tijaabo ah oo ku saabsan layliyo layliyo lagu xusay iyo ka shaqeynta laylisyada. Intaas waxaa sii dheer, imtixaannada la qaado simistar kasta waxay u baahan yihiin dadaal waxbarasho oo dheeri ah inta lagu jiro waxbarashadaada. Marka laga hadlayo dhibaatada, kimistari sidoo kale waa maado u baahan culeys shaqo oo is barbar dhig ah oo ka yimaada ardayda marka loo eego koorsooyinka kale. Sababtaas awgeed, arday badan waxaa kormeera mid ka mid ah xirfadleyaashayada ruug-caddaaga ah inta lagu guda jiro waxbarashadooda, kuwaas oo had iyo jeer garab taagan xitaa xilliyada adag. Iyadoo aan loo eegin inay caawimaad ka tahay sixitaanka, hagaajinta ama ka caawinta qorista shaqadaada tacliimeed, qoraalladeenna ghostwriters ayaa hadda ardayda dhexdooda looga yaqaan qof walba. baaritaan macaamiisha Inaad awood u yeelatid inaad si sax ah u siiso jawaab sax ah farsamo ahaan iyo inay kaa nasato daraasadahaaga waqtiga badan qaadanaya!
Qoraalka ghost ee kiimikada guud
Maaddaama kiimikada ay tahay saynis tiro badan oo takhasus gaar ah leh, adeegga qorista ee ugu fiican waxaa lagu gartaa qoraayo kala duwan oo ku siin kara talooyinka ugu fiican ee suurtogalka ah iyadoo kuxiran aagga cilmi-baarista. Maaddaama aan nahay bixiye waxqabadyo ghostwriting ah, oo ku saleysan waaya-aragnimadeena, waxaan si dabiici ah u leenahay xulashada qorayaasha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah adiga oo ugu wacan qoraa badan oo la heli karo. Waxaad filan kartaa taageero shakhsiyeed oo aad uwanaagsan inta lagu jiro amarkaaga, kaas oo aad markasta noogu sheegi karto rabitaankaaga shaqsiyeed si kalsooni leh. Adeegyadayada sida qorayaasha cirfiidka ee waaxda kimistariga badanaa waxaa ka mid ah:
Taageerida qoraallada tacliinta (shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD)
Falanqaynta, qiimeynta iyo soo koobida natiijooyinka cilmi baarista
Diyaarinta shaqsiyeed qoraal gacmeedyada iyo qalabka waxbaridda
ku caawi Akhrinta iyo dib u akhrin
abuurista Shaqada guriga iyo bandhigyo
Chemistry aagga sheybaarka
Adeeggeenna ghostwriter wuxuu ku nool yahay macaamiisha qanacsan. Ardayda kimistariga waxay inta badan leeyihiin baaritaano sheybaar inta ay waxbarashadooda socdaan. Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno. Wixii la soo dhaafey waxay muujiyeen in arday badan aysan mar kaliya inoo soo jeesanayn, laakiin shaqadeena qancinta awgeed dhowr jeer awgood adeegeena Si aad dib ugu dhacdo. Waxaan had iyo jeer ku siineynaa xalka saxda ah ee su'aalahaaga. Waxaan ka jawaabeynaa dhammaan weydiimaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo loo marayo taageerada shaqsiyadeed ee dhow - dhammaan meelaha takhasuska leh iyo, dabcan, kiimikada sidoo kale. Taada dhis baaritaan macaamiisha oo waxaan kuu samayn doonnaa dalab si gaar ah ugu habboon baahiyahaaga!
Chemistry iyo rajadaada shaqo
Ka qalin jabinta kiimikada, lid ku ah waxa aad u maleyn karto, kuma shaqeyn doontid oo kaliya shaybaarada dhaqameed. Hawlaha sida falanqaynta kiimikada, cilmibaarista iyo horumarka ka sokow, waxaa soo ifbaxay aagag kale oo aad ka qalin jabisay aad ku hormarin karto xirfaddaada kimistariga. Meelaha waxay u dhexeeyaan injineernimada nidaamka illaa suuq-geynta iyo tafatirka / dukumiintiyada ilaa maaraynta wax soo saarka iyo shatiyadaha. Hadda waxaa jira barnaamijyo badan oo tababbaran oo loogu talagalay ardayda ka qalin jabisay kimistariga ee shirkadaha waaweyn.
Xaaladda dhaqaale ee ardayda ka qalin jabisay kimistariga
Iyadoo la raacayo, mushaharka bilowga ee farmashiyeyaasha sidoo kale waa mid cajiib ah. Inta badan waa inta udhaxeysa 40.000 ilaa 55.000 euro. Dabcan, mushaharkaan bilowga ah sidoo kale wuxuu si xoogan uguxiranyahay guulahaaga waxbarasho. Adeegyadeenna ghostwriter ayaa ku garab taagan mar walba haddii aad u baahan tahay caawimaad deg deg ah! Abuur dalabkaaga macaamiisha gaarka ah hadda!
Hubinta tayada ee duurka kimistariga